Sidina Toronto mankany Mont-Tremblant amin'ny Porter Airlines izao
Home » Lahatsoratra farany farany » Airlines » Sidina Toronto mankany Mont-Tremblant amin'ny Porter Airlines izao
Airlines • Airport • Aviation • Vaovao Mafana • Vaovao momba ny fitsangatsanganana • Fitsangatsanganana an-trano • Vaovao farany Brezila • Vaovao • People • tompon'andraikitra • Tourism • Fitaterana • Fanavaozana ny tanjon'ny dia • Travel Wire News
Sidina Toronto mankany Mont-Tremblant amin'ny Porter Airlines izao.
Ao anatin'ny 70 minitra monja dia afaka manidina avy any amin'ny seranam-piaramanidina Billy Bishop Toronto City mankany amin'ny seranam-piaramanidina iraisam-pirenena Mont-Tremblant ny mpandeha.
Manomboka ny 17 Desambra ny serivisy ara-taonan'ny Porter Airlines ary haharitra hatramin'ny 28 martsa 2022.
Misy ihany koa ny sidina mampifandray avy amin'ny toerana samihafa any Kanada Porter Airlines.
Ny mpandeha rehetra mihoatra ny 12 taona sy efa-bolana miala amin'ny seranam-piaramanidina kanadiana dia tsy maintsy manome porofo momba ny vaksiny alohan'ny hidirana, manomboka amin'ny 30 Novambra.
Porter Airlines dia mamerina ny serivisy ara-potoana any Mont-Tremblant, Que., amin'ny fotoanan'ny fialantsasatra. Manomboka ny 17 desambra ny fotoam-pivavahana, ka hatramin’ny 28 martsa 2022.
"Vonona hiverina any amin'ny toerana halehantsika voalohany izahay hatramin'ny nanombohan'ny asa tamin'ny volana septambra," hoy i Michael Deluce, filoha sy CEO, Porter Airlines. "Mont-Tremblant dia anisan'ny toerana voalohany nalehan'i Porter tamin'ny nananganana ny zotram-piaramanidina, ary mankafy ny karazana hetsika ririnina atolony ny mpandeha."
Ao anatin'ny 70 minitra monja dia afaka manidina avy any amin'ny seranam-piaramanidina Billy Bishop Toronto City mankany amin'ny seranam-piaramanidina iraisam-pirenena Mont-Tremblant ny mpandeha. Misy ihany koa ny sidina mampifandray avy amin'ny toerana samihafa Porter. Ny fandaharam-potoana ririnina dia ahitana sidina hatramin'ny efatra isan-kerinandro.
Taorian'ny baikon'ny Governemanta Canada momba ny fanaovana vaksiny ho an'ny mpandeha an'habakabaka, ny mpandeha rehetra mihoatra ny 12 taona sy efa-bolana miala amin'ny seranam-piaramanidina kanadiana dia tsy maintsy manome porofo momba ny fanaovana vaksiny alohan'ny hidirana, manomboka ny 30 Novambra.
Seranam-piaramanidina Porter dia zotram-piaramanidina rezionaly manana foibe ao amin'ny Billy Bishop Toronto City Airport ao amin'ny Nosy Toronto any Toronto, Ontario, Canada. An'ny Porter Aviation Holdings, fantatra taloha amin'ny anarana hoe REGCO Holdings Inc., Porter dia miasa tsy tapaka ny sidina eo anelanelan'i Toronto sy ireo toerana any Kanada sy Etazonia amin'ny fampiasana ny Canadian-built. Bombardier Q400 turboprop fiaramanidina.